मङि्सर ०३, २०७३ NK-Bigul Media
बुर्जखलिफा टावर मुनिबाट माननीय सांसदहरुलाई पत्र
=========================== सम्मानिय मान्य सांसद ६०१ महोदय, सात समुद्र पारीको देश युएई ( दुबई ) रहेको बुर्जखलिफा टावर मुनि बाट पत्र कोर्दैछु । आस छ हजुरहरुले यो पत्र पाउनुहुनेछ ।
सम्मानिय मान्य ६०१ सासद जिउ आरम हुनुहुन्छ होला ! म पनि दु:ख सुख आराम नै छु रातभरको १२ घन्टा डिउटी गरेर बसेको छु । अहिले मुलुकमा दुई पटक संविधान सभाको चुनाव भयो सायद सन्सारमै यो पहिलो उदाहरण हो । जसबाट दोस्रो पटक भएको चुनावले बल्लतल्ल संविधान कुन चराको नाम रहेछ ? आम जनतालाई अनुभुती भयो बिडम्बना जुन हर्सोउल्लास छाउनुपर्ने थियो आन्दोलन , हडताल , नाकाबन्दी र प्राकृतिक बिपत्तिले आक्रन्त आम मुलुकमा पार्यो । ती सबैलाई भुलेर अहिले चर्चा चलेको मान्य ६०१ सासदहरुको हाल बुझ्दै आएको ९७ हजार सेवा सुविधा तलबले महङ्गो आधुनिक जीवनशैलीमा त्यो प्रयाप्त थिएन र यहाँहरुको गहिरो पिडालाई मैले सुन्ने मौका पाए । अनलाइन समाचार फुर्सदमा हेर्ने मौका मिल्दा झट्ट ” सासदहरुको गुनासो १ लाख ६५ हजारले घर खर्च पनि पुग्दैन ” भन्ने समाचारमा मेरो नजर गयो र तीन चार पटक दोहोर्‍याई तेहर्‍याई पढे र मनमा केही भावना उद्देलना आयो पत्र कोर्ने कोसिस गरे ।
पक्कै पनि हाल ९७ हजार तलब सेवा सुविधा २० बर्ष अघि बढेको रहेछ ती समय धेरै कष्टकर जीवन यापन हाम्रो मान्य सासदहरुले भुलेका छन त्यो मनमा मलाई पनि अनुभव भयो । अझै युरोप , अमेरिका तिर सरकारको सेवा , सुविधा सासद , सिनेट मेम्बरलाई उच्च छ जुन नेपालमा छैन । आज जुन मान्री सासद भएर तपाईहरु ६०१ जना अहिले संविधानसभामा जनता र पाटीबाट मनोनयन भएर जानुभयो त्यो तपाईंको लागी महत्त्वपूर्ण छदैछ । हाल मासिक ९७ हजार सेवा सुविधा तलब लिने तपाईहरु शतप्रतिशत धनी काठमाडौवासी हुनुहुन्न कोहि खोटाङ , कोहि जुम्ला , कोहि ताप्लेजुङ , कोहि गोर्खा , कोहि रौतहट , कोहि झापा , कोहि स्याङ्जाको हुनुहुन्छ । कतिपयको शैक्षिक योग्यता हेर्ने हो भने पनि अन्डर एसएलसि देखी केही डाक्टर पिएचडीवाला पनि हुनुहुन्छ तर सेवा सुबिधा तलबमान बराबर छ ।
आम जनता र मुलुकको लागि भनेर गाउँगाउँमा भोट माग्ने यहाँहरु मुलुक र जनताको जिवनस्तर उकास्न कस्तो सेवा सुविधा दिनुभएको छ ? यहाँहरुलाई बिमारी हुँदा सिङापुर , थाइल्यान्ड , लण्डन , अमेरिका , दिल्लीको अस्पताल छदैछन । करोडौं दोहन गरेर भए पनि सेवा सुविधा लिनुनै भएको छ । हुम्लाको एउटा एउटा प्रस्ताव पीडामा छट्पटी गरिरहेकी महिला डाक्टर र अस्पतालको कल्पना गर्छ तर त्यसै अस्पताल र डाक्टरको अनुहार नदेखी मर्नुपरेको कैयन समाचार आईरहेका छन । तपाईंहरुको सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्नु भएको नामवली पनि निकै देखेको छु । स्वर्गीय सुशील कोइराला १ करोड ६३ लाख , पुर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलि १ करोड २६ लाख , रामकुमार प्रसाद साह ८० लाख , प्रथम रास्ट्रपति डा रामवरण यादव ६० लाख पछिल्लो समयमा अमेरिमा उपचारको लागि लगेको १ करोड पैसाको हिसाब नजोडी , झलनाथ खनाल ५५ लाख ( फर्चौट हुन बाकी ) चक्र प्रसाद बास्तोला ५० लाख , नारायणकाजी श्रेष्ठ ३८ लाख , तुलसी गिरि २५ लाख , पुर्ण कुमारी सुवेदी २५ लाख , गोबिन्दराज जोशी २० लाख , खुमबहादुर खड्का २० लाख , हाल आएर जर्मनी नागरिक दित बिबाह गरेर नेपाल मै बस्ने सुजाता कोइरालालाई हाल ५० लाख पैसा उपचारको नाममा उपचार सेवा सुविधा लिएको कुरा आम जनतामा छन ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा उपचारको।खर्चको बिल ससदमा पेस गर्दा कण्डमसम्म्को बिल जुन स्वास्थ चौकीमा सित्तैमा पाइन्छ बिल पेस गरेर भए पनि सेवा सुविधा पाउनु नै भएको छ । डोल्पामा सामान्य रुघाखोकीको कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । मिर्गौला पीडित भएर , ब्लड क्यान्सर भएर सर्वसाधारण जनता गरीबीको कारण बाट अस्पतालमा नै सुसाईट नोट लेखेर मर्नु परेको छ खैत सरकारले ५० रुपैयाँ पनि दिएको समाचार बाहिर अहिले कहिँ आएका छैन ? सरकारले आफ्नो नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने होईन र ? एउटा सोलुखुम्बुको मिर्गौला पीडित र काठमाडौको समान नागरिक अधिकार छैन र ? एउटा गाउँको गरिब जनताको छोरी र सासदको ज्यान बराबर होईन र राज्यको यति धेरै किन विभेद ?
होला मान्य सासद र एउटा पाचथरको लिम्बुको सन्तानमा जिम्मेवारी र हैसियत फरक होला ।
राजनीति आम गरिब जनताको लागि भनेर गर्ने अनि आफ्नो , आफन्त , व्यक्तिगत लाभ मात्रै लिने राजनीति कहिले सम्म गर्ने ? सासद माननीय २०४६ साल पहिले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ६ हजार ऋण अहिले १९ हजार ऋण छ । अब तपाईको तलब ९७ हजारबाट १ लाख ६५ हजार हुँदै रहेछ खुसी लाग्यो अझै अलिक तपाईंहरुले भने जस्तै १ लाख ६५ हजारलेत घर खर्च धान्न नै मुस्किल छ त्यो पैसाले हामीले के गर्ने ? तपाईहरुको गहिरो आक्रोशको म पनि सहमत छु । तर नेपाल , नेपालीको बार्षिक आय आम्दानी कति छ ? जनता के चाहन्छन् ? कहिले मुल्यांकन गर्नु भएको छ ? तपाईंहरुको आवस्यकता अनुसारको नेपाल , नेपालीको समृद्धि बिकासको काम अहिलेसम्म कति गर्नु भयो ? कति वटा कलकारखाना स्थापना गर्नुभयो ? कति वटा हाइड्रोपावर निर्माण भए ? सडक संजाल कति बिकास भए ? मुलुकमा रोजगारको व्यवस्था कति गर्नुभयो ? स्वस्थ सेवा कति आम सर्वसाधारण पुर्‍याउने काम भयो ? शिक्षाको स्तर कति विकसित र सर्वसुलभ बनाउने काम भयो ? पर्यटन , व्यापार , खेलकुद , सास्कृतिकको कति व्यवसायीकरण भयो कहिले मुल्यांकन गर्नु भएको छ ?
तपाईंहरुलाई आफ्नो सन्तान छोराछोरी बिमारीले छट्पटी हुँदा पिडा कतिको हुनेगर्छ ? त्यो राम्रोसँग थाहा छनी यसैगरी नेपाल , नेपालीहरु पनि आफ्नो छोराछोरी , सम्पत्ति सम्झेर कहिले लाग्नुभएको छ ? धेरै प्रश्न छन जुन मनमा यहाँ तपाईंहरुलाई सोध्न मन लागेको । हिजो गाउँमा हलो कोदालो गरेर हिड्ने कयौं मान्री सासदहरु हुनुहुन्छ के पहिला कसरी मासिक कति खर्च गर्नुहुन्थ्यो ? २० देखि ५० हजारमा तपाईंको महिना खर्च गरेर हिड्नुभएको होइन र ? अहिले यति सुविधा जनताबाट पाउदा पनि हिजो र आजको जनता , मुलुकको जिवनस्तर कहिले मुल्यांकन गर्नुभएको छ ? सुन्यतामा राम्रो सुविधा सबैको चाहना हुन्छ तर घाँटी हेरि हाड निल्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखानको ध्यान कहिले तपाईंहरुको जान्छ ? यो समाचार बाहिर आए पछि निकै तपाईंहरुको विचार प्रति टीका टिप्पणी नभएको होईन । उल्लेख्य रूपमा तपाईंहरुले हालसम्म नेपाल र नेपालीहरुको लागि गरेको योगदान कति छन ? माथिल्लो बहुउद्देश्यीय जलविद्युत कौडिको भाउमा भारतलाई , फास्ट ट्रयाक महङ्गोमा भारतलाई महाकाली , कोशि , टनकपुर , कालापानी भारतलाई सुम्पेको आदि होइनन् र ? किन तलबमा तपाईंहरुको खरो कुरा उठाउनु भयो ? अहिले जनता तपाईंहरुको विभिन्न नैतिकता हिन कामले गर्दा आजित भए अहिले जनताले पीडित पक्षले सामाजिक संजाल फेस बुक , ट्विटर अनलाइन समाचारबाट खरो आलोचना गर्ने काम सुरुवात भएको छ । किन भयो ? यो सबै कुरा ? जनता आजित भए अब कहि सहनु ? कसरी सहनु ? आखिर कहिले सम्म सहनु ? तपाईंहरुलाई १ लाख ६५ हजार पैसा ३० दिन घर खर्च चलाउन गाह्रो भयो । तर आज ८० लाख नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा भारत , मलेसिया , गल्फमा छन जसमा ५ प्रतिशत मात्रै अलिक राम्रो र दक्ष काममा छन उनीहरुको तलब पनि सोही किसिमको छ । बाकी सबैले १५ हजार नेपाली देखी ५० हजारमा चित्त बुझाउनु परेको छ ।
म एउटा डिपिएस सेकुरिटी गार्ड हु । म दुबई बुर्जखलिफा टावरको मुनि कार्यरत छु । दुबई एउटा हाई टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको र सिस्टममा चलेको मुलुक हो । मेरो बेसिक तलब १२०० दिराम हो र २८ दिन १२ घन्टा काम गरे पछि कहिले १६१५ कहिले १७८२ दिराम पाउने गर्छु । म दुबई आउनको लागि नेपालमा २ लाख ७२ हजार पैसा मेनपावर तिरेर आएको हु । फ्री भिसा र फ्री टिकेटमा त्यति पैसा तिरेर आएको मैले दुबई पुलिस बाट १ हप्ताको डिपिएस ट्रेनिङ , क्लास , गरेर मौखिक २० , लिखित २० र टिकमार्क ६० नम्बरको परिक्षा दिनुपर्ने र फिजिकल २४ पटक पुसअप र २४ पटक सेटअप गर्नुपर्छ । परिक्षामा लिखित , मौखिक , टिकमार्कबाट ६० नम्बर ल्याउनुपर्ने र फिजिकल सेटअप , पुसअप २४/२४ गरे पछि मात्रै सेकुरिटीमा काम पाइन्छ । सुरुमा कम्पनीले एडभान्स पैसा दिदैन र दिएन पनि बल्ल पास भयो अनि काम गर्ने ठाउमा पनि क्लाइन्टले अन्तर्वार्ता लिन्छ र पास भयो भने मात्रै डिउटी पाउने यो सबै गरेर १२०० को लागि म काम गरेर साहुको लाखौं छप्के व्याजमा आए । मैले मेरो ५५ बर्षको बुबा आमा , भाइ बहिनीलाई छोडेर आएको छु ! र घरमा मैले बिहान बेलुका दुई छाक खाना खान र सालमा एक सरो कपडा लाउन चाडवाडमा मासुमङ्स खानको लागि घरखर्च मिलाईरहेको छु । योत एउटा मेरो उदाहरणमात्रै हो म जस्तो लाखौं दाजुभाइ , दिदीबहिनीको आआफ्नो व्याथा छ जस्तो तपाईहरुको भयो ।
हामी बिदेशमा बस्नेलाई कति हेप्छन , कुट्छन , पेल्छन, ठेल्छन , रुदै , भोकै दुई पैसाको लागि रगत पसिना बगाएर महिनामा आईएमई गर्छौं त्यो रेमिटेन्स पनि हुन्डीबाट पो पैसा जानेरछ । कानुनी हिसाबले मुलुकलाई पनि दुई पैसा होस र भरपर्दो भएर पैसा घरमा पाओस् भएर रेमिटेन्स आईएमई गरेको पनि कस्तो राम्रो तपाईंहरुको समयन्त्र फ्री भिसा र टिकटमा मात्रै बिदेश जान पाउने तर मेनपावरलाई लाखौं नबुझाई कसरी आउन पाउनु ? उनीहरुको पनि आआफ्नै अस्वस्त प्रतिस्पर्धा छ र महङ्गोमा भिसा किनेर आफू खानु पर्ने , अफिस , स्टाप , सबैतिर मिलाउनु नै पर्ने अनि बल्ल पठाएको पैसा पनि हुन्डीबाट बल्लतल्ल पाउने अनि त्यो नै समयन्त्रको प्रमुख यहाँहरुलाई हामीले कहिले सम्म लाखौं लाख दिएर पाल्न सक्छौं ?
हामी बिदेशमा बस्नेले धेरै आस भरोसा राखेका हुन्छौं बिदेशमा हुँदा मुलुकको माया अत्यधिक भएर आउछ त्यो बिदेशमा बसेर मुलुकको कल्पना गर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । बिदेशमा हामीले हजारौं महल , अत्यधुनिक सडक , बिकास निर्माण भएको छ । हामिलाई एउटा सपना हुन्छ कुनै दिन हामी पनि आफ्नो मातृभुमीमा बिदेशमा भएको सीप , ज्ञान , योग्यता प्रयोग गरेर मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउने र आफ्नो जीवनसाथि , आमाबुबा , भाइबहिनी भान्टङ्भुण्टुङ संगै रहेर स्वदेशमै बस्ने एउटा काल्पनिक सपना बोकिरहेका हुन्छौं तर कहिले तपाईंहरुले हाम्रो बिदेशमा गएको आम युवाहरूलाई अब नेपालमै रोजगार दिने र बिदेशमा सिकेको अनुभवलाई लिएर नयाँ समृद्ध नेपाल बनाउने भनेर कल्पना सम्म गर्नुभएको छ ?
एउटा सियो नबन्ने मुलुकमा अब सम्पन्नसाली अमेरिकी , युरोपको सासद , मन्त्री , कर्मचारीले पाउने सुविधा खोज्न अलिकति पनि लाजसरम लागेन है तपाईंहरुलाई ? हुनत लाज भाको भएत किन यस्तो हुन्थ्यो नि ? विश्वमा अन्यत्रको शासकलाई हेर्दा भियतनामको होची मिन्हले रास्ट्रपति हुँदा सात ठाउमा टालेको कोट र टायर चप्पल लगाएर उनी रास्ट्रपति घोषणा भएका थिए । हाल निर्वाचित ४५ औं अमेरिकी डोनाल्ट ट्रम्पले कहिले पनि एक डलर पनि तलब नलिने घोषणा गरेर जनताको लागि एउटा उदाहरण बने । नेपाल भन्दा ६५ गुना ठुलो चीनको रास्ट्रपति सि जिङ पिङ सन्सारको सबैभन्दा गरिब रास्ट्रपति मानिन्छन । के तपाईंहरुले पनि यी राज्यको ढुकुटी दोहन बन्द गरेर हालको तलबलाई मासिक ५ हजार , १० हजार गर्दा के बिग्रन्छ ? धर्ती फुट्ने आकाश खसिहाल्ने त होईन होलानी ?
निजामतीको तलब अघिल्लो सरकारले २५ प्रतिशत बढायो के आम नेपाल नेपालीहरुको आर्थिक हैसियत तलब तपाईंहरुको सेवा सुविधा बढाउनु भएझैं आजसम्म कहि कतै नेपाल र नेपालीको आर्थिक , सामाजिक स्तर पनि बढाउनु भएको छ ? राजनीति कस्को लागि र किन गर्नुहुन्छ ? आखिर मुलुक , जनताको लागी होईन ? खैत त्यो भावना ? अब घर चलाउन मासिक १ लाख ६५ ले धौधौ भए मान्य सासद जिउ अब नेपाल सरकारले २४ घन्टामा १५ हजारमा पासपोर्ट दिने गरेको छ । जसको सुविधा राम्रो हुन्छ भारत जान पासपोर्ट चाहिनन सिक्किम बाहेक । मलेसिया ५० हजार २ लाख , गल्फमा ५० देखि ७ लाख लाग्छ राम्रो कमाई हुन्छ । आउनुहोस् संगै कमाउला र मिलेर घरबार चलाउला मान्य सदस्य जिउहरु ।
दुबईमा डिपिएस सेकुरिटीमा २ लाख ५० हजार , पिएसबिटिमा ४ लाख अहिले बढेर डिपिएसको लागी ४ लाख पिएसबिटिको लागि ७ लाख लाग्ने मेनपावर दलालले भन्न थालेकाछन । हिजोसम्म बिजुलि माग भन्दा धेरै आवश्यकता देखाउदै एमाले , काङ्ग्रेसको युनियन भ्रष्ट , भरौटे कर्मचारीले लुटेर खाईरहेको रछ जब प्राधिकरण हाकिम मा कुलमान घिसिङको आवगमन भयो १८ घन्टाको लोडसेडिङ शुन्य झरेर निद हराम भयो । एउटा सामान्य कर्मचारीले सर्बोच्च अदालत , प्रधानमन्त्री , कानुनलाई लत्याउदै नवराजा हुन्छन् लोकमान सिंह कार्की जस्तो कर्मचारी तपाईंहरुले चुनेको होईन ? अनि केको लागि अब लाखौं तलब तपाईंहरुलाई अब राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने ? मुलुकमा १ हजारको लगानी नभएको मान्छेलाई लखपति , करोडपती बनाउने मान्य सदस्य आफ्नो अनुहारलाई ऎनामा हेर्नुभएको छ ?
सक्नुहुन्छ भने माथिल्लो कर्मचारीको तलब सेवासुविधा कटौती गर्नुस। अहिलेसम्म सबैले तलब सुविधाहरु मुलुकले हिजो ४६ सालमा ६ हजार ऋण अहिले १९ हजार प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमामा पुर्‍याउने काम गरे तर कहिले १९ हजार ऋणलाई प्रत्येक नेपालीको भागमा १९ हजार नाफा दिने काम भएनन् बरु सकिन्छ भने हालको तलब घटाउने काम गर्नुन मान्य सदस्य जिउ जनताले तपाईंहरुलाई सम्बोधन गर्नेछन् जस्तो नेपाल बिधुत प्राधिकरणको कुलमान घिसिङ , चिकित्सक क्षेत्रको डाक्टर गोबिन्द केसि , नेपाल प्रहरीको सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल जस्तो नाम कहिले भुल्नेछैन कोहि माईकललालले छुन मात्रै खोजुन न अब जनताले सहेर बस्ने छैन । उनीहरुको नाङ्गो पारेर सात पुस्तालाई सम्झना हुने हिसाबले कार्वाही जनताले गर्नेछन अब विचार राम्रो पुर्‍याउनु होला । मुलुकको लागी राजनीति गर्ने तपाईहरु भारत खर्बौ पैसा राख्ने त्यो पैसा किन नेपालमा राख्नुहुन्न ? कस्को लागि केका लागि पैसा राख्नुभएको हो ?
आज नगेन्द्र मोदिले कालोधन माथीको गतिलो कार्वाहीमा त तपाईंहरु पनि पर्नुभयो नि होइन ? माफिया , तस्करी , घोटाला , राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने , गुण्डागर्दी , चोरी डकैती , लुटपाट गर्ने , हुन्डी कारोबार , दुई नम्बरी तस्करी , मान्छे मार्ने , पैसाको आडमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न आन्दोलन , हडताल गर्ने को हो ? मान्य सदस्यहरु नै होईन ? आखिर कहिले सम्म ? मान्य सासद सदस्य जिउ यहाँहरुलाई खान ल लाउन नै अति कष्टकर भएको हो भए दुई जना सम्मलाई म मेरो घर उदयपुरमा बिहान बेलुका दुई छाक खाना खुवाउन सक्छु । सालमा सामान्य किसिमको एक च्यात्रो कपडा लगाईदिन सक्छु । त्यहाँ गएर बस्नुस यर तपाईंहरुलाई तारे होटलमा खाना खुवाउन , सेमिनार , ड्रेसअप गर्न भने सक्दिन । धन्यवाद मान्य सासद जिउ । भुल भए माफी चाहन्छु ।
उहीँ परदेसी हेम चन्द्र राई
युएई ( दुबई ) बुर्जखलिफा मुनिबाट यो पत्र
प्रकाशित : शुक्रबार, मङि्सर ०३, २०७३१२:०४
भावीले कोरिदिएका हत्केलाका रेखाहरूकाे बाटाे भएर……..